I-Afro ye-Natural Afro Kinky Ubungqina Bomntu Bokuvalwa ... Soie Hair Atlanta I-Afro ye-Natural Afro Kinky Ubungqina Bomntu Bokuvalwa ... Soie Hair Atlanta
I-Afro ye-Natural Afro Kinky Ubungqina Bomntu Bokuvalwa ... Soie Hair Atlanta - Soie Virgin Hair Extensions
ubungakanani 12 intshi 14 intshi 16 intshi 18 intshi 20 intshi 22 intshi 24 intshi
12 intshi 14 intshi 16 intshi 18 intshi 20 intshi 22 intshi 24 intshi
Izinwele ze-Organic, ezingaguqukanga ze-VIRGIN. Izandiso zethu zeenwele ze-Afro Kinky zeNdalo zenziwe zivela kwizinwele zabantu. Ezi zandiso zingabuye zilungiswe kwaye zinike ibukeka bomeleleyo, unyaka ohlala unyaka we-1 okanye ngaphezulu ngokunyamekela.
yethu I-Afro ye-Natural Afro Kinky Iintloko Zabantu Ukuvalwa zithengwa ngokuthe ngqo ukusuka eIndiya kwaye yenye yezona ziintlobo zeenwele ezingaphethekiyo kwiimarike. Zonke iimveliso zethu zivunwa kwiimeko zabo zendalo kwaye isiqalo ngasinye sivela kubaxhasi be-1-2 ukuqinisekisa ukuhambelana.
Ifumaneka ngobude ukuya kwii-intshi ze-24
I-4 i-ounces nganye
I-Afro ye-Natural Afro Kinky Virgin Hair Hair Extensions
Buyela kwi-Queen Queen Collection